Warbixin:-“Dhulbahante Loo Tashaday Isna Sii kala Tashaday” – KHAATUMO NEWS
Warbixin:-“Dhulbahante Loo Tashaday Isna Sii kala Tashaday”
Bulshada SSC, ayaa haatan waxaa aad looga dayrinaya tolow halkee ayay noloshadu ku danbayn doonta 30 sano ee soo aadan ma waxay ku jiri doonaan Guumaysigan mise dad is xoreeya siyaasad ahaan iyo Dhul ahaanba ayay noqonayaan?
Gobolada SSC, waa gobollo dhul ahaan iyo dad ahaanba leh baaxad weyn kuna yaalla halka xidhiidhisa Waqooyi iyo koonfur.
Gobolada SSC, iyo dadka ku Nool waxaa laga waayay In Ay Tallo iyaga u gaar ah isku maamulan kuna noolaadan taas badalkedana waxay ka door biden in ay u kala sacabiyan“Puntland Somaliland Iyo Fadaraalka”
Maanta Umadkasta oo kamid ah Qabiilada, soomaaliyeed waxay leeyihiin maamul ay ku suntan yihiin islamarkaana taladoodu maaha mid ku dhex shaan-dhaysan Fadaraal ama maamul kale.
Gobolada SSC, iyo bulshada ku nool waxaa u tashaday markii ay tashan waayen Maamulada Ka xiga Hareeraha, haday tahay Somaliland iyo haday tahay puntland.iyo Fadaraalka oo ka xidhoonaya somaliland iyo puntland.
Somaliland, waxay duulaan qorshaysan oo loo adeegsanaayo qeybo kamid ah Bulshada SSC, Ku Soo qaaday Dhulka SSC Kuna haysata,
Puntland, iyana waxay Duulaan siyaasadeed ku haysata Isimada SSC, oo ah Madaxa ugu sareeya gobolada SSC.
Ugu Danbayn Waxay su aashu tahay Waa maxay Xalka Dhulbahantahan loo tashaday isna sii kala tashaday?
Previous Post: Daawo:Taallooyinka Muqdisho iyo Shqsiyadda Madaxweyne Farmaajo
Next Post: Daawo:MD Axmed Karaash Oo Si Diiran Loogu Soodhaweeyay Sweden,